नेपालमा खेलेको टी–२० र यूएईसँगको टी–२० फरक होः उपकप्तान मल्ल | Neplays.com
नेपालमा खेलेको टी–२० र यूएईसँगको टी–२० फरक होः उपकप्तान मल्ल
By Neplays	 Last updated Jan 31, 2019
नेप्लेज, १६ माघ । नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा सिरिज जिते पछि अब बिहीबारदेखि शुरुहुन लागेको टी–२० क्रिकेट सिरिज जित्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि नेपाली क्रिकेट टिमले बुधबार पनि अभ्यासमा समय विताएको छ ।
अभ्यासका दौरान नेपाली क्रिकेट टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले यूएईमामा रहेका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालमा कम्तिमा हरेक प्रदेशमा क्रिकेट मैदान हुन जरुरी रहेको बताए । उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एक दिवसीयबाट टी–२० मा सिफ्ट हुन कत्तिको गाह्रो छ?
५० ओभरको कन्सेप्टबाट एकैपटक २० ओभरमा आउन अलिकति फरक त भइहाल्छ । तर हामीले एकदिवसीय मान्यता पाइसकेपछि एउटा खेलाडीको हिसाबले माथिल्लो लेभलको क्रिकेट खेल्ने कोशिस गरिरहेका छौं । त्यसलाई एडप्ट गर्न जरुरी छ । जतिसक्दो चाँडो एडेप्ट गर्न जरुरी छ ।
घरेलु क्रिकेट टी–२० मै फोकस भएकाले कत्तिको सजिलो होला ?
टी–२० मा हुनु एउटा कुरा हो । यो लेभलमा कत्तिको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । घरेलु सिरिज र अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजले फरक पार्छ । त्यहाँ र यहाँको विकेटले फरक पार्छ । घेरेलु सिरिजमा खेलाडीहरु सवि परिचित नै हुन्छन् । त्यसमा अलि सहज हुन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि दोब्बर मेहनत गर्न जरुरी हुन्छ ।
२० मा तपाई रोल के हुन्छ ?
टिममा मेरो रोलको कुरा गर्नुहुन्छ भने, मैले एक दिवसीय क्रिकेटमा ओपनिङ व्याट्सम्यानको रुपमा खेले । एकातिरबाट राम्रो सुरुआत गर्ने हो । पहिलो खेलमा गर्न सकिएन दोस्रो र तेस्रो खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकियो । एक दिवसीय भन्दा टी–२० मा अझैं राम्रो गरेर आउने तयारीमा छु ।
ज्ञानेन्द्र मल्लले राम्रो सुरुआत गर्न सकेन पनि भन्छन् ?
हामी त्यो कुरामा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । मैले ब्याटिङ प्रशिक्षकसँग पनि निकै छलफल गरेको छु । कहिलेकाँही राम्रो बलमा पनि नराम्रो सट हान्दा आउट भइएको छ । ती गल्तीहरुबाट पाठ सिक्दै आउँदा दिनमा अझै राम्रो गर्ने लक्ष्य छ । अहिले नेपाली टिमका लागि बलियो सुरुआत नै आवश्यक छ ।
एक दिवसीय सिरिज जितेपछि नेपालमा पूर्वाधारको कुरा फेरि उठेको छ, नेपाललाई कस्तो आवश्यकता पर्छ ?
कहिले जितेपछि कहिले हारे पछि नेपालको पूर्वाधारको कुरा भइहाल्छ । जित्दा अलि राम्रो तरिकाले सुनिन्छ जस्तो लाग्छ । अब मेहनत गर्दै जाउँ, नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेकोले पनि विकासमा बाधा पुगेको हुन सक्छ । चाँडैनै यो समाधान होस । नेपालमा लङ इनिङको क्रिकेटको आवश्यकता बढी छ । यसैगरी घरेलु प्रतियोगिता पनि बाह्रै महिना आयोजना होस भन्ने चाहन्छु ।
नेपालमा क्रिकेटका लागि अहिले कतिवटा मैदान आवश्यक छ ?
अहिलेलाई क्षेत्र अनुसार कम्तिमा एउटाका दरले हुन जरुरी छ । हामीलाई पीच र आउट फिल्ड भए पुग्छ । तर त्यो राम्रो हुनुुपर्छ । यति मात्रै हुन सक्यो भने घरेलु क्रिकेट अझ अघि बढ्छ ।